एक वर्डप्रेस वेबसाइट को सुरक्षा - Semalt बाट गाइड
धेरै ई-वाणिज्य वेबसाइटहरू WordPress मा स्थापित छन्। बिभिन्न व्यक्तिहरुले बिभिन्न WordPress वेबसाइटहरुमा आउन सक्ने विभिन्न ह्याक्सको कार्यान्वयनको प्रभावलाई आश्चर्यचकित गर्छन्। भवदीय, इन्टरनेट सबै प्रकारका दुर्भावनापूर्ण कार्यहरूको साथ व्यक्ति भरिएको छ। स्प्यामिंगबाट स्पूफिंगसम्म, यो स्पष्ट छ कि ह्याकरहरूले तपाईंको वेबसाइटलाई लक्षित गर्न सक्दछन् र उनीहरूको खराब मनसाय कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्। सामान्य रूपमा, ह्याकरहरू तपाईंको SEO प्रमोशन वा तपाईंले चलाइरहनुभएको अन्य अभियानमा रूचि भएको व्यक्ति भएको नाटक गर्दछ। यसको सट्टामा, तिनीहरूले केहि धेरै प्रमुख ह्याक्सहरू कार्यान्वयन गर्छन्।
सामान्य ह्याक्सले क्रस साइट स्क्रिप्टि ((XSS), फिसि।, व्यक्तिगत जानकारी चोरी गर्न साथै धोखाधडी ट्रान्सफरहरू समावेश गर्न सक्दछ। धेरै व्यक्तिले लाखौं ग्राहकहरूको क्रेडिट कार्ड जानकारी लिएका छन् केवल जानको लागि र पछाडि पछाडि स्थानान्तरण गर्न। अन्य केसहरूमा, तिनीहरूले वेबसाइट ल्याउन र उनीहरूको प्रयोगकर्ता खातामा हास्यास्पद चीजहरूको साथ मानिसहरूलाई अभिवादन गर्न सक्दछन्। नतिजाको रूपमा, तपाईंको वर्डप्रेस वेबसाइटको सुरक्षा साथै तपाईंको ग्राहकहरूको सुरक्षामा निर्भर छ कि तपाईं यी हैकरहरूलाई टाढा राख्न कसरी सतर्क हुनुहुन्छ।
आर्टेम अब्गारियन, Semalt डिजिटल सेवाहरूको वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, केहि ह्याक प्रूफ ट्रिकहरू प्रस्तुत गर्दछ, जसले तपाईंको वेबसाइटलाई ह्याकरहरू विरूद्ध सुरक्षित गर्न सक्छ:
१. सुरक्षित लगइन पृष्ठहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
वर्डप्रेस लगइन पृष्ठ प्राय: धेरै सुरक्षित हुँदैन। एक योग्य ह्याकरका लागि, सम्भव छ कि त्यस विशेष लगइन पृष्ठबाट वेबसाइटको डेटाबेसमा क्रुरतापूर्वक आफ्नो मार्ग बनाउन। तपाइँको वर्डप्रेस साइट बनाउने क्रममा, तपाइँले सुरक्षित गर्नुहुने वेबसाइट डोमेनमा एक /wp-login.php वा / wp-admin / थप्नको लागि विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस उपायले यस प्रकारको प्रविष्टिका साथै अन्य सस्तो आक्रमणहरू पनि रोक्न सक्छ। सुरक्षित पासवर्डहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको साइटको व्यवस्थापक प्यानललाई उच्च सुरक्षा हुन सक्छ। नतिजाको रूपमा, साधारण पासवर्डहरू जस्तै १२4545 avoid वा अनुमान गर्न पासवर्डको बेवास्ता गर्नुहोस्।
२. SSL प्रयोग गरी ईन्क्रिप्ट डेटा।
यस सुरक्षा लेरले ब्राउजर र सर्भर बीचमा डाटा साटासाट सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्दछ। नतिजाको रूपमा, एक ह्याकरसँग कठिन डाटाबेसमा उपस्थित सूचना डिक्रिप्ट गर्न सक्दछ। नाम र नम्बरहरू हुनुको सट्टा, ह्याकरले कोड भेट्छ।
2. २-कारक प्रमाणीकरण सक्षम गर्नुहोस्।
तपाईंको ग्राहकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि एक उपायहरू 2fa मार्फत छन्। केहि सफल ह्याकरहरू धेरै खाताहरूमा पासवर्डहरू पाएर अन्तमा जान्छन्। जे होस्, २-कारक प्रमाणिकरणले समीकरणमा अर्को सुरक्षा तह थप्यो। नतिजाको रूपमा, पासवर्ड आफै पर्याप्त छैन। एक प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न कोड मोबाइल फोन पाठ सन्देशबाट उपलब्ध हुनुपर्दछ, जुन जानकारी ह्याकरको स्वामित्व नहुन सक्छ।
ह्याकरहरू साइबर अपराधको आधार बनाउँदछ जुन आज हाम्रो समाजमा छ। प्रत्येक अनलाइन उद्यम ह्याक विधि वा स्क्याम गतिविधिसँग सम्बन्धित छ। वेबसाइट प्रोग्रामरले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक गर्दछ कि ह्याकरहरू विरुद्ध संरक्षणका विधिहरू सतर्क हुनुपर्दछ र उनीहरू यी आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन सुनिश्चित गर्दछन्। तपाईंको ई-वाणिज्य वेबसाइट को सुरक्षा तपाईंको हातमा छ। यो दिशानिर्देशले केहि ह्याक-प्रुफ विधिहरू प्रदान गर्दछ, जसले तपाईंको साइटको सुरक्षा बढाउन सक्छ। केहि केसहरूमा, तपाईको वेबसाइटलाई हैकरहरूको बिरूद्ध बचाउनाले यो सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि तपाईको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) प्रयासले फल दिन्छ किनकि गुगलले तपाईको साइटलाई असुरक्षितको रूपमा चिन्ह लगाउँदैन।